मेरो सांगीतिक यात्रा अनवरत रहन्छः नारायण कडरिया | Suvadin !
मेरो सांगीतिक यात्रा अनवरत रहन्छः नारायण कडरिया
प्रविधिकै उच्चतम् प्रयोगबाट बजारलाई नियमन गरिए राम्रा गीत–संगीतको बजार अथाह छ। अर्कोतर्फ नेपालको संविधानले बौद्धिक सम्पत्तिलाई अन्य सम्पत्तिसरह स्थान दिएको छ। र, यससम्बन्धी कानूनहरु बनेका छन्। प्रश्न भनेको हाम्रो प्रतिवद्धता र नियतमाथि हो। गीत–संगीतका लागि आउँदा दिनहरु सुनौला छन्। मेरो यात्रा अनवरत रहन्छ।
Mar 10, 2018 16:01
Shared: 365 times | Share this on
रेडियो र टेलिभिजनमा कुशल प्रस्तोता नारायण कडरियाको परिचय बदलिएको छ। उनले गायककाे परिचय थपेका छन्। उनले ‘जाम पारी पारी’ गीत ल्याएका छन्। गीतमा नारायण आफैँले शब्द, संगीत र स्वर भरेका छन्। गीतको म्यूजिक भिडियोमा अभिनय पनि उनी आफैँले गरेका छन्। प्रस्तोताबाट गायक, रचनाकार तथा अभिनय यात्रामा छलाङ मारेका नारायणको पछिल्लो अनुभवका विषयमा शुभदिन संवाददाता उकिता दाहालले गरेको छोटो कुराकानीः
स्टेज प्रस्तोता, रेडियो तथा टेलिभिजनकर्मीका रुपमा परिचित तपाई सांगीतिक क्षेत्रमा कसरी आइपुग्नु भयो? अनुभव कस्तो रह्यो?
–मैले रेडियो कार्यक्रम सञ्चालकको रुपमा मेरो करियर शुरु गरेको हुँ। त्यसपछि स्टेजहरुमा धेरै कार्यक्रमहरु चलाएँ। पछिल्लो समय टेलिभिजनमा कार्यक्रम गरेँ। तसर्थ मेरो परिचय प्रस्तोताकै रुपमा छ। कार्यक्रम सञ्चालककै रुपमा एउटा भीडमा गएर म श्रोताहरुका माझमा बोल्दा आफूभित्र रहेको गीत–संगीत प्रतिको मोहलाई महसुस गर्थें। कार्यक्रम चलाउने क्रममा आफ्नै गीत सुनाउने चाहना जागिरहन्थ्यो। पछिल्लो समय नेपालका धेरै गायक गायिकाहरु, त्यसैगरी संगीतकर्मीहरुसँग निकट सम्बन्ध पनि रह्यो। त्यसै क्रममा उहाँहरुकै हौसला र सहयोगले गर्दा म पनि गीत गाउन सक्छु, संगीतमा भिज्न सक्छु भन्ने कुरा महसुस भयो। र, मैले आफ्नो चाहनालाई जाम पारी पारीमार्फत प्रस्तुत गरेको हुँ।
तपाई गायकभन्दा अगाडि एक श्रोता हुनुहुन्छ। अरु कलाकारहरुले गाएको गीत र आफैँले सिर्जना गरेको गीत सुन्नुमा कति फरक अनुभूति गर्नु भयो त?
–हामीले धेरै गायकगायिकाले गाउनु भएका गीत सुनेर सहजै गुनगुनाइरहेका हुन्छौं। तर, आफैँ सिर्जना गर्दा त्यति सहज हुँदो रहेनछ। मैले निकै मिहेनत गर्नुपर्यो। मैले स्टुडियोमा गाउनुअघि संगीत प्रशिक्षक भानुभक्त ढकालसँग गाउन सिकेँ। उहाँले दिनु भएको आँटले स्टुडियो पसेर गाउन सक्ने भएँ। गीत बनेर बजारमा आउदा र अरुले मेरो गीत गाएको सुन्न पाउदा असाध्यै खुशी छु।
गीत गाउने रहर सबैलाई हुन्छ। कति युवाले गीत गाएर एल्बम् नै बनाउँछन्। त्यो भीडमा आफूलाई कसरी फरक ढंगले प्रस्तुत गर्नुभएको छ?
–वास्तवमै गाउन धेरैलाई रहर हुन्छ। मन परेको गीत धेरैले गुनगुनाउनु हुन्छ, गाउनु हुन्छ। ‘कभर सङ’को कन्सेप्ट त्यसरी नै आएको हो। पहिले–पहिले रेडियो नेपालमा गएर भ्वाइस टेस्ट दिएर गायकको लाइसेन्स लिनुपर्ने जमाना छैन। प्रविधिले ल्याएको परिवर्तनले सबैले आफ्नो प्रतिभा देखाउन सकिने प्ल्याटफर्म बनेका छन्। म फरक छैन। म पनि अरु कलाकारजस्तै नै हो। म एउटा अनट्रेण्ड सिङ्गर हुँ। आगामी दिनमा संगीत सिकेर अझै राम्रा गीत–संगीत पस्कन सकुँ भन्ने लागेको छ।
नेपाली सांगीतिक क्षेत्र व्यवसायिक बन्न सकेको छैन। थुप्रै स्थापित कलाकार पनि पलायन भएका छन्। तपाईको यात्रा चाहिँ कति समयका लागि हो?
–म चाहिँ आशावादी छु। हिजो क्यासेट, सिडी, डिभिडी निकालिइन्थ्यो। राम्रो गीतहरु श्रोताले किनेर सुन्थे। प्रविधिमा आएको आमूल परिवर्तनले बजारको स्वरुप फेरिएको छ। यही परिवेशमा प्रविधिकै उच्चतम् प्रयोगबाट बजारलाई नियमन गरिए राम्रा गीत–संगीतको बजार अथाह छ। अर्कोतर्फ नेपालको संविधानले बौद्धिक सम्पत्तिलाई अन्य सम्पत्तिसरह स्थान दिएको छ। र, यससम्बन्धी कानूनहरु बनेका छन्। प्रश्न भनेको हाम्रो प्रतिवद्धता र नियतमाथि हो। गीत–संगीतका लागि आउँदा दिनहरु सुनौला छन्। मेरो यात्रा अनवरत रहन्छ।